Thomas Tuchel Oo Sharraxay Sababta Uu Thiago Silva Uga Maqnaanayo » Axadle Wararka Maanta
Thomas Tuchel Oo Sharraxay Sababta Uu Thiago Silva Uga Maqnaanayo
Tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa sheegay, in aanay filaynin in difaaca reer Brazil ee Thiago Silva uu u ciyaaro kulamada ugu soo horreeya xilli ciyaareedka dhowaanta bilaabmaya, kaddib markii uu laacibkani kasoo laabanayo fasax uu ugu maqnaa waddankiisa.
Thiago Silva ayaa ka qayb-galay ciyaaraha qaramada Latin America ee Copa America oo uu saftay illaa ciyaartii ugu dambaysay ee finalka oo Argentina ay hal gool oo madi ahaa kaga qaadday Koobka, waxaana markii uu soo dhamaaday tartankaasi uu galay fasax uu la qaadanayo qoyskiisa.
36 jirkan ayaa qayb weyn ka qaatay guushii Chelsea ee Champions League ee xilli ciyaareedkii hore, laakiin kulankii ugu dambeeyey ayuu kaga baxay dhaawac muruqa ah.
Tababare Thomas Tuchel ayaa sheegay, in Thiago Silva uu seegi doono kulamada ugu soo horreeya horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, sababtuna ay tahay in aanu taam u noqon doonin jidh ahaan maadaama uu kusoo habsaamayo fasaxa oo uu waqti dambe ka imanayo.
“Mar walba waan ku fasaxsanahay haddii uu Thiago fasax ku maqan yahay, waxaanu nagu soo laaban doonaa inta aanu ku jirno tababarka, sababtoo ah da’diisa darteed waxa uu u baahan yahay tababar si uu u ciyaari karo horyaal adag sida Premier League.” Ayuu yidhi Tuchel.
Waxa uu intaas raaciyey: “Hadda xoogaa dibu-dhac ah sababo shaqsi ah ayaa ku imanaya waqtigii uu kasoo laabanayay Copa. Waan ka murugooday in aanay ku guuleysanin koobka kulankii Argentina ee dalkooda, balse ma filayo in ay taasi dibu-dhac weyn ku tahay, sababtoo markii u dambaysayba wuu ku guuleysay.”